Super MOV Ihe Ntụgharị maka Mac, enwere n'efu maka obere oge | Esi m mac
Otu n'ime ụdị ngwaọrụ a na-enyekarị na Mac App Store bụ nke ndị ntụgharị si vidiyo gaa faịlụ vidiyo, ma ọ bụ n'etiti usoro vidiyo dị iche iche, ma ọ bụ ọdịyo, na ihe ndị ọzọ. Nke a zuru oke nghọta nyere na enwere ọtụtụ ọrụ ntanetị yana, na mgbakwunye na n'efu, na-enye anyị ohere ịme mgbanwe ndị a. Agbanyeghị, mgbe ọ bịara, dịka ọmụmaatụ, na vidio ụlọ nkeonwe, ịgbanwe usoro ntanetị anaghị adị ka ezigbo echiche kacha mma iji kpuchido nzuzo anyị. Ọzọkwa, anyị anaghị enwe njikọ ịntanetị na MacBook anyị mgbe niile. Ya mere, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ nwere ngwa dika Super MOV Ihe Ntụgharị na kọmputa anyị Mac.
Super MOV Ihe Ntụgharị bụ ngwa mepụtara nke ọ bụla MP4 Studio otu, na-ahụ maka ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke otu ụdị ahụ na-enye gị ohere ịnyefe faịlụ vidiyo, faịlụ ọdịyo, onyonyo, wdg. Ugbu a Super MOV Ihe Ntụgharị dị maka n'efu maka obere oge, i nwere ike ịchekwa euro 19,99 nke ọ na-akwụkarị ụgwọ. Ọ bụrụ na Mac gị na-efu efu ezigbo vidiyo ntụgharị, nke a bụ ohere gị, yabụ ekwela ka ọ gbapụ.
1 Gbanwee ihe niile, ihe niile na ihe niile na efu euro
2 Super MP3 Ihe Ntụgharị, nwekwara n'efu maka obere oge
Gbanwee ihe niile, ihe niile na ihe niile na efu euro
Dị ka m nweela ọganihu, Super MOV Ihe Ntụgharị Ọ bụghị naanị na ngwa na nke ị ga-enwe ike nyefee video faịlụ site na otu usoro ọzọ, ma ọ bụ wepụ ọdịyo na ha; ikekwe ọ bụghị nke kachasị mma, ma ọ bụ ma eleghị anya ee, n'eziokwu anaghị m anwale ha niile. Mana ihe m maara bụ na m nwalere ngwa ndị ọzọ site na otu ndị otu mmepe na ndị a bụ ngwa nke kwụpụtara maka ezigbo arụmọrụ ha, ogo dị elu na ịdị mfe nke iji. Ma ọ bụrụ na anyị nwekwara ike inweta ya n'efu dịka ugbu a, anyị nwere ike ịjụ obere.
Dị ka anyị nwere ike ịgụ na nkọwa nke ndị ọrụ ahụ dere, «Super MOV Ihe Ntụgharị Ọ na-enye ohere tọghata ọ bụla HD video na nkịtị video ka MOV usoro maka QuickTime playback, Apple TV, iPhone 6/6 Plus / 5S / 5C / 5 / 4S, iPad Ikuku 2 / Ikuku / mini 3 / mini 2 / mini / 4, iPod na a arụmọrụ zuru oke. Tọghata AVCHD videos (M2TS, MTS), HD videos (TS, HD MP4, HD WMV, HD MPG, HD MPEG) na nkịtị videos dị ka AVI, WMV, Flv, MKV, M4V, DivX, XviD, MPEG, 3GP, SWF, MPEG4, MOD na ndị ọzọ ka MOV naanị na ole na ole clicks. "
Otu n'ime ndị isi uru nke Super MOV Ihe Ntụgharị anyị na-ahụ:
Na ntughari nke ọ bụla video ka MOV usoro a na-eme na efu ọnwụ ọnwụ.
Na-enye ohere wepụ ọdịyo faịlụ nke imerime video formats.
Na-enye ohere mbubata faịlụ mere na iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro maka edezi ya ma emechaa.
A na-eme ntụgharị faịlụ ka a "ọsọ ọsọ" ọsọ.
Ọ dakọtara na ogbe akakabarede otú ị na-adịkwaghị nwere iji tọghata videos otu otu.
O nwere otutu edezi ngwaọrụ: nchapụta, iche, saturation, oge mkpụbelata, olu na ihe ndị ọzọ.
Kensinammuo na mfe na-eji interface.
Super MOV Ihe Ntụgharị Ọ nwere a mgbe price nke 19,99 euro ma ugbu a ị nwere ike nweta ya maka free maka a obere oge.
Ihe ọ bụla MP4 MOV Ntụgharị9,99
Super MP3 Ihe Ntụgharị, nwekwara n'efu maka obere oge
Ma Super MOV Ihe Ntụgharị Ọ bụghị naanị na ihe ọ bụla MP4 Studio ngwa ị nwere ike nweta otu narị percent free taa. Na Super MP3 Ihe Ntụgharị Ga-enwe ike tọghata ihe niile gị ọdịyo na video faịlụ site na dị iche iche formats dị iche iche formats (MP4, MOV, M4V, MKV, AVI, WMV, Flv, FLAC, WAV, M4A na WMA, ka MP3, AAC, AIFF, ALAC, WAV, M4A) na oke ọsọ na "Ọdachi nke ogo", yana wepụ ọdịyo na vidiyo gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Super MP3 Ihe Ntụgharị ị nwere ike ile anya nke a Na m kọọrọ gị n'oge ọzọ mgbe ọ dịkwa n'ahịa ọ bụ ezie na, n'eziokwu, na ọnụahịa efu, eziokwu bụ na ị na-ewerela oge.
Super MP3 Ihe Ntụgharị Ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 15,99 mana ugbu a ị nwere ike ịchọta ya na mbelata 100%, kpamkpam n'efu, na Applọ Ahịa Mac Mac.
Super MP3 Ihe Ntụgharị15,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Super MOV Ihe Ntụgharị maka Mac, nweere onwe gị ugbu a maka obere oge
Free bụ naanị Super MP3 Ihe Ntụgharị.
ka nọ na .19,99 XNUMX, maka ugbu a.
Apple kwadoro uru nke ekwentị mkpanaka na 2016